umphathi - I-Mag emangalisayo
Izizathu Ezi-5 Ezintsha Okufanele Usebenzise I-Twitter Ukuthuthukisa Ibhizinisi Lakho
Kungase kubonakale kudida kancane ukuthi ungasebenzisa kanjani i-Twitter ebhizinisini lakho, nokho imibono emihlanu emisha izoqinisekisa ukuthi uyayiqeda yonke inkulumo futhi uthole ulwazi oluhle lokumaketha lwe-Twitter oluzokwenza ngempela...
Imininingwane Okufanele Uyazi Ngaphambi Kokuthenga I-E-liquids
Mashi 31, 2022
Ingabe umlutha wokubhema? Ukugcina iphakethe likagwayi esandleni kuwuhlobo lwezidingo zakho, ke. Njengoba, akwenzeki ngaso sonke isikhathi ukuya esitolo uyothenga amaphakethe kagwayi ohlelweni lwakho olumatasa; ungahamba uyothenga...
Izinto ezi-3 ongakwazi ukuziba ngenkathi uhambisa
Mashi 30, 2022
Siyakuhalalisela, unqume ukuthuthela endlini! Manje njengoba leso sinqumo sesithathiwe, sekuyisikhathi sokungena kweminye imininingwane engelula kangako. Cha, angikhulumi ngokuhambisa ifenisha, ngikhuluma nge-conveyancing. Uma uhamba, ikakhulukazi okokuqala ngqa, udinga...
I-Freelancer Vs. Isisebenzi - Kungani Kufanele Ngifunde I-Graphic Design?
I-Freelancing imele umbono othakazelisayo wochwepheshe abafisa ukuba ngabaphathi babo. Lokho kungenxa yokuthi abantu abaningi bafuna ukusebenza kodwa ngesikhathi esifanayo bazizwe bekhululekile. Ekwakhiweni kwezithombe kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi yini okufanele uyikhethe ukuze…
Izinsizakalo Zokusingathwa Kwewebhu Ezinhle Kakhulu ZaseBrazil
Ibhizinisi Lezinsuku Zanamuhla lincike kakhulu ebukhoneni bobuchwepheshe kanye nentuthuko yabo. Isebenzisa ubuchwepheshe obusengaphambili be-inthanethi, inkampani ingasebenza futhi isebenze kahle emisebenzini yayo yansuku zonke. Akubona ubuchwepheshe be-inthanethi kuphela obuwusizo kakhulu ekuqhubeni inkampani, bungakwazi…
Ukuthola Isevisi Yokusingathwa Kwewebhu Elungile
Uma uqala ukwakha iwebhusayithi yakho yebhizinisi elincane, inani elincane lezinqumo okufanele uzenze lingabonakala lingaphezu kwamandla akho. Kufanele kube yini igama lesizinda sakho? Ubani okufanele aklame isayithi? Kufanele ibukeke kanjani ilogo yakho? Futhi empeleni, izinkathazo zakho ...
Amaqiniso Okubhaliswa Kwesizinda Esijabulisayo Angase Akumangaze
Mashi 29, 2022
Ucabanga ngokuthola igama lesizinda elinezinhlamvu ezintathu? Kuthiwani ngomunye oqanjwe ngoMalume uBen? Lokho ngeke kwenzeke kuwe. Zonke izinhlanganisela zezinhlamvu ezintathu zamagama wesizinda ziqoqwe eminyakeni edlule. Okufanayo kuya emagameni amadoda ... kodwa,...
Isikhathi Soshintsho? Ungasondela Kanjani Ku-Logo Redesign
Amanye ama-logo aphelele kakhulu, ahlala engashintshile amashumi eminyaka. I-Coca-Cola, isibonelo, yenze izinguquko ezincane kuphela kulogo yayo eminyakeni engu-127 ikhona. Lokho kungenzeka kungenxa yokuthi ilogo iyabonakala ngokushesha kangangokuthi inkampani ayifuni ukuphazamisa...
Okufanele Ukubheke Kumklami Wewebhusayithi
Iwebhusayithi yakho ingubuso benkampani yakho. Kungokwemvelo ukuthi ungafuna ukuba nochwepheshe othembekile esihlalweni esingaphambili, oqondisa iwebhusayithi yakho. Uma uqala ukubheka umklami wewebhu, uzobona ngokushesha ukuthi kunezinkampani futhi…
Izindlela Eziyi-9 Zokuthola Ithrafikhi Esizeni Sakho - Futhi Ukugcine Kubuya
Isiza esingcono kakhulu emhlabeni asilutho uma kungekho muntu osivakashelayo. Ukuthola ithrafikhi nokuyigcina iza ngakho-ke kuyinto ehamba phambili kunoma yiliphi ibhizinisi elincike ezivakashini zesayithi ukwenza ukuthengisa nokuthola umkhondo. Ngenhlanhla, ziningi izinto amabhizinisi...
1 2 3 ... 206 Olandelayo